1 Samueri 19:4
4 Saka Jonatani akataura zvakanaka nezvaDhavhidhi+ kuna baba vake Sauro. Akati kwavari: “Mambo ngaarege kutadzira muranda wake Dhavhidhi, nekuti haana kukutadzirai uye zvinhu zvaakakuitirai zvakakubatsirai.
1 Samueri 25:23, 24
23 Abhigairi paakaona Dhavhidhi, akabva akurumidza kuburuka padhongi, akapfugama, akadzikisa musoro wake pamberi paDhavhidhi. 24 Akabva apfugamira pedyo netsoka dzaDhavhidhi, akati: “Ishe wangu, mhosva yacho ngaive yangu; regai murandasikana wenyu ataure nemi, uye teererai mashoko emurandasikana wenyu.
Esteri 4:13, 14
13 akapindura Esteri achiti: “Usafunga kuti zvauri muimba yamambo iwe wega ndiwe uchapukunyuka pane vamwe vaJudha vese. 14 Nekuti kana ukaramba wakanyarara panguva ino, kubatsirwa nekununurwa kuchauya kuvaJudha kuchibva kumwe,+ asi iwe neimba yababa vako, muchaparara. Uye ndiani anoziva kana wakava mambokadzi nekuda kwenguva yakaita seino?”+
11 Vachazivisa nezvekukudzwa kweumambo hwenyu,+
Votaura nezvesimba renyu,+
8 Usatsiura museki, nekuti achakuvenga.+
Tsiura munhu akachenjera, uye achakuda.+